Saida waxay Soomaaliya uga tagtay Yurub sanadkii 2007, iyadoo raadineysa nolol wanaagsan. Nag saxibteed ah ayaa aaday Yurub waxayna u yeedhey iyada, iyada ku andacoonaya inay mar kale ka tagto Talyaaniga. Niyad jab iyo dhiirrigelin, waxay go’aansatay inay iskeed tagto iyada oo waxba ka ogayn qatarta safarka.
“Sababtoo ah Talyaanigu wuxuu umuuqday meel dhow, qof walba wuxuu doonayay inuu halkaas aadayo. Nolol fiican maan haysanin meeshii aan ku jiray ama meesha aan ku noolahay. Waxaan ahaa qof dumar ah oo lagu khasbay inay ku tiirsanaato kuwa kale. Marka, waan ka tagay. Waan ka tagey maxaa yeelay gabadhaas waa iga tagtay. Fikradda ayaa maskaxdayda ku jirtay. Uma seexan karo sababteeda darteed.
Saida waxay ku safraysay safar xun oo khatar ah oo ka gudbay Sahara ilaa Liibiya. Cunto yar ayaa jirtay oo waxay ku qasabtay inay cabto biyo ay ku sumoobeen batrool. Waxay goob joog u ahayd xadgudubka joogtada ah ee ku yimaad dadka tahriibka ah ee tahriibiyeyaasha waxayna ku aragtay meydad dhinaceeda wadada dhinaceeda. Waxay si gaar ah uga naxday inay aragto hooyooyin badan oo la socda carruurtooda yar.
“Aad bay iigu adkeyd safarkaas aniga iyo dhibaatooyin badan. Laakiin ka fikir qof leh saddex carruur ah oo naas nuujiya oo aan haysan wax uu cunto! Waxaan arkay hooyooyinka Soomaaliyeed oo leh caruur iyo hooyooyinka ka yimid wadamada deriska ah, sida hooyooyinka reer Eritrea ee aan arkay. Waxay ahayd hooyo aad u xoog badan oo qalbigeyga ayaa ku jabtay iyada iyo carruurteeda. Intay hooyadu canugeedii u taagtay naaska, waa la garaacay. Waxaad arki lahayd haweenka uurka leh oo la garaacayo. ”
Markii ay timid xeebta Liibiya, waxay diyaar u ahayd inay fuulo dooni tahriibiye laakiin ma aqbali karin qiimaha. Doonta ayaa ka tagtay iyada la'aanteed. Hal saac ka dib iyada iyo dadka kale ee xeebta jooga ayaa helay codsi caawimaad ah dadkii doonta saarnaa. Doonta ayaa degtay oo quustay. Dhamaan 73 qof ah way dhinteen.
“Qayladii ugu dambeysay ee aan ka maqlo dadka doonta saaran waxay ka mid ahayd gabar hadda dhashay wiil yar. Habeenkaas dadkii doonta saarnaa waxay kaloo kujireen seddex haween ah oo udhashey Ereteriya. Midkood waxay waday cunug hal sano jir ah mid kalena waxay lahayd cunug afar sano jir ah. Ma badbaadin iyaga, oo sidaas ayay ku dhinteen. Midkoodna ma badbaadin.”
Ka dib safar cabsi leh oo ku timid doon yar oo alwaax ah, inta lagu guda jiray oo ay waayeen jihada dhowr jeer, Saida waxay timid Malta. Waxay joogtay muddo 7 bilood ah ka dibna waxay tagtay Jarmalka, halkaasoo ay hadda ku nooshahay oo ay haysato rukhsad joogis. Dhawr sano ka dib dhibaatadii ay soo martay, ayay ka soo wacday wiil ay adeer u ahaayeen oo jooga Liibiya oo isku dayaya inu gaadhaan Yurub. Ma haysan lacag wuxuuna u baryay caawimaad.
“Waxaan ku jiray xaalad aad u adag. Ugu dambayntii waxaan ka codsaday dadka Soomaaliyeed inay wax ii soo ururiyaan. Waxaan galay deyn isaga aawadiis. Waa la jir dilay oo la garaacay, laakiin waxaan helay caawimaad.”
Inaadeerkeed aakhirkii wa la siidaayay oo wuxu yimid Talyaaniga, oo jidh ahaan iyo maskax ahaanba jabsan. Saida waxay farriin culus u dirtay dadka ku sugan Soomaaliya kuwaas oo ka fakaraya inay u safraan Yurub halista ugu sii gudbaan Liibiya iyo Badda Mediterranean-ka: waxaa lagugula dhaqmi doonaa si ka xun xayawaanka. Waxay aragtaa inay dadku sameynayaan go'aanno halis ah si ay u haajiraan sababtoo ah beenta tahriibiyeyaasha iyo farriimaha marin habaabinta ah ee ka yimaada asxaabta iyo dadka ay garanayaan.